Hayao Miyazaki nivadika 75 andro vitsy lasa izay | Famoronana an-tserasera
Na dia andro maromaro lasa izay aza rehefa feno 75 taona tsara tarehy izy, dia fotoana mety indrindra hitondrana azy ny sasany amin'ny genius an'ity artista ity ny sarimiaina Japoney izay nanjary mpiorina voalohany amin'ny sarimihetsika sarimihetsika mahafinaritra toa ny Ailiky ny Fanahy, Ny totoro mpifanila trano amiko, Princess mononoke o Miakatra ny rivotra.
Lehilahy manam-pahaizana tamin'ny androny izay mahita ny loko sy ny fahafinaretany amin'ny fiainana tao anatin'ireo dimy taona niasan'ny asa aman-draharaha izay nahalotoany antsika tamin'ny fomba miaina miaina an'ity tontolo ity. ny namely voalohany ny Nausicaä an'ny lohasahan'ny rivotra ary ilay nahatonga ny famoronana ny Studio Ghibli, izay nanidy varavarana tsy ela akory izay.
Ao amin'ireny Sarimihetsika mihetsika 7 fa nangoniko manodidina ireo faritra ireo ianao dia afaka mahita ny sasany amin'ireo sanganasany mahatalanjona. Miyazaki dia ode ho an'ny fahazazana ary amin'ny asany rehetra dia misy lohahevitra saro-pantarina izay misy ifandraisany betsaka amin'ny olombelona, ​​ny natiora, ny fivoarana, ny maha-izy azy ary ny andraikitra sahaniny.
Mpanatontosa sarimihetsika manokana toy ny olon-kafa vitsivitsy ary mbola eo amintsika, na dia efa nisotro ronono tamin'ny fiainany matihanina aza izy. Izany indrindra no antony tsy diso mihintsy ny mampatsiahy anao ary andro vitsivitsy monja taorian'ny nahatratra 75 taona.
Miaraka amin'ny Fanahy hiala nahazo ny Golden Bear tao Berlinale 2002 ary azony ny Oscar ho an'ny sarimihetsika mihetsika tsara indrindra tamin'io taona io ihany ary inona no ho fankasitrahana ny asany amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena any Venise.
Miyazaki dia iray amin'ireo lehibe ho an'ireo izay efa nanana ny toerany ny tantara amin'ny sinema hampahatsiahivana miaraka amin'izay fa ny asak'izy ireo rehetra dia asan'ny zavakanto ihany. Mpanakanto tadidintsika avy eto amin'ireo tsipika fohy ireo ary mizara ny sasany amin'izy ireo amin'ny sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Hayao Miyazaki, iray amin'ireo kilalao saribakoly lasa 75 taona